INDLELA YOKULUNGISA I-USB YEDIVAYISI ENGAZIWAYO IMPAZAMO WINDOWS 10 - AMAXABISO
Indlela yokulungisa i-USB yedivayisi engaziwayo Impazamo Windows 10
Ukufumana iVenkile ye-USB engaziwa Impazamo kunye nokuyeka isixhobo ukusebenza nanini na xa ufaka isixhobo sangaphandle se-USB (iPrinta, ikhibhodi ye-USB kunye negundane, i-USB flash drive njlnjl Inkqubo ye- Isixhobo se-USB asibonakali Windows 10 Umcimbi uhlala unxulumene nomqhubi. Ukukhuphela kunye nokuhlaziya abaqhubi be-USB elungileyo sisisombululo esifanelekileyo sokulungisa le mpazamo.
Iziqulatho umboniso 1 Lungisa isixhobo se-USB esingaziwayo Windows 10 1.1 Ukulungisa ngokukhawuleza 'isixhobo se-USB esingaziwayo' 1.2 Hlaziya abaqhubi bezixhobo 1.3 Faka uhlaziyo lwamva nje lweWindows 1.4 Guqula ukuseta i-USB Root Hub 1.5 Khubaza ukuseta okukhethiweyo kokuNqunyanyiswa kwe-USB 1.6 Khubaza ukuqala ngokukhawuleza 1.7 I-Tweak yeWindows Registry ukulungisa isixhobo asibonwanga Impazamo
Icebo le-USB alaziwa Esinye sezixhobo eziqhotyoshelwe kule khompyuter asisebenzi kakuhle kwaye iiwindows azisiqondi.
Isixhobo sokugqibela se-USB esixhume kule khompyutha asisebenzi kakuhle, kwaye iiwindows azisiqondi.
Icebo le-USB alaziwa
windows 10 ikhibhodi ayisebenzi emva kohlaziyo
Lungisa isixhobo se-USB esingaziwayo Windows 10
Icebo le-USB alibonwanga mpazamo Windows 10 ayiqwalaselwa kuphela ngelixa uqhagamshela izixhobo ezitsha ze-USB, ikwaqatshelwa kwimeko yezixhobo ze-USB ezinje ngeMouse yakho okanye ikhibhodi esele ixhunyiwe kwikhompyuter. Kwimeko apho ufumana i-USB Icebo elingaqondakaliyo, nanini na xa uxhuma isixhobo se-USB kwiWindows 10. Nazi ezona zisombululo zinobuchule bokuphelisa le mpazamo.
Ukulungisa ngokukhawuleza 'isixhobo se-USB esingaziwayo'
Xa i-USB drive yakho 'ingaziwa' kwiWindows PC yakho, Nazi ezinye izisombululo ezisisiseko zokuzama. Susa nje isixhobo sakho se-USB, qala kwakhona ikhompyuter yakho yeWindows, emva koko uphinde ufake iplagi kwiDivayisi yakho ye-USB ubone ukuba iyasebenza okanye ayisebenzi. Kwakhona, Nqamula zonke ezinye iziqhotyoshelweyo ze-USB ukuqala kwakhona ikhomputha uze uzame ukujonga ukuba i-USB isebenza okanye ayikho.
Ukuba ngaphambili isixhobo se-USB khange sikhutshwe ngokufanelekileyo sinokubangela le Mpazamo kuqhagamshelo olulandelayo. Kulesi sizathu faka isixhobo sakho kwi-PC eyahlukileyo, masilayishe abaqhubi abafunekayo kuloo nkqubo kwaye emva koko bayilahle ngokufanelekileyo. Phinda ufake iplagi kwi-USB kwikhompyuter yakho kwaye ujonge.
Ukongeza, zama ukudibanisa isixhobo se-USB kwizibuko le-USB elahlukileyo ngakumbi Sebenzisa iikhompyuter ngasemva izibuko le-USB oku kuluncedo kakhulu kwabanye abasebenzisi abalungisa I-USB ayamkelwa ukwenzela bona. Ukuba usafumana isisombululo esifanayo.
Hlaziya abaqhubi bezixhobo
Ngamanye amaxesha Windows 10 ayizukuqonda i-USB hard drive ngenxa yeengxaki zomqhubi. Hlaziya okanye Phinda ufake isixhobo soMqhubi we-USB ukuze uqiniseke ukuba siphelelwe lixesha, asihambelani nomqhubi weDivayisi ongenzi ukuba esi sixhobo singaziwa njengempazamo.
Cinezela iWindows + R, chwetheza yitshise.msc Kulungile ukuvula umphathi wesixhobo. Emva koko skrolela ezantsi kwaye wandise Umlawuli weBhasi eLawulayo jikelele , khangela indawo ye-USB enophawu lwesikhuzo esimthubi, cofa kuyo kwaye ukhethe Hlaziya isoftware yomqhubi. Emva koko khetha Khangela incwadi yekhompyuter kwisoftware yomqhubi-> Makhe ndikhethe kuluhlu lomqhubi okhoyo kwikhompyuter yam. Khetha I-USB Hub yesiqhelo kwaye ucofe Okulandelayo, Windows 10 iya kuhlaziya abaqhubi be-USB.
Khetha iGeneral USB Hub
Ngoku susa isixhobo se-USB ngokuqala kwakhona windows kwaye uqhagamshele kwakhona itsheki ye-USB esebenzayo, ukuba ayindwendweli iwebhusayithi yezixhobo, khuphela kwaye ufake umqhubi okhoyo.
Jonga ukuba ngaba uHlaziyo luyafumaneka kwikhompyuter yakho. Ukuba uhlaziyo luyafumaneka, iiWindows ziya kufakela iidrives ezikhoyo zekhompyuter yakho. Ukujonga kunye nokufaka iiwindows zakutsha nje ezivulekileyo Useto> Uhlaziyo kunye noKhuseleko -> Uhlaziyo lweWindows -> Jonga uHlaziyo
Vumela iWindows ukuba ijonge uhlaziyo olukhoyo kwaye uyifake kwikhompyuter yakho. Kwimeko apho uhlaziyo lukhona, izixhobo ezifumanekayo ezikhoyo zakutshanje ziya kufakwa kwikhompyuter yakho.
Guqula ukuseta i-USB Root Hub
Phinda uvule umphathi wesixhobo (cofa ekunene kwimenyu yokuqala kwaye ukhethe umphathi wesixhobo) Chitha ii-Universal Serial Bus Controllers ezantsi, Khangela ukhetho lwe-USB Root Hub, cofa ekunene kuyo kwaye ukhethe iipropathi. Ifestile entsha yokungena iya kuvula ukuhambisa Ulawulo lwaMandla tab kwaye ungakhangeli Vumela ikhompyuter icime le fowuni ukugcina amandla . cofa ok ukugcina utshintsho.
Qaphela: Ukuba uneeHubhu ezininzi ze-USB ezingaphezulu, kuya kufuneka uphinde lo msebenzi amatyeli aliqela.
Khubaza ukuseta okukhethiweyo kokuNqunyanyiswa kwe-USB
Ngokuzenzekelayo, ikhompyuter yeWindows isetelwe ukugcina amandla ngokumisa ukunikezelwa kwamandla kwizixhobo zangaphandle ze-USB, ngalo lonke ixesha zingasebenzi. Kodwa ngamanye amaxesha olu seto lokonga umbane ngamanye amaxesha kunokubangela iingxaki ezinje ngeKhowudi yeMpazamo 43 kunye neDivayisi ye-USB engaziwa Mpazamo kwiWindows 10. Khubaza ukukhetha kwe-USB ukumisa ngokulandela amanyathelo kwaye ujonge ukuba kuyanceda.
Cinezela iWindows + R, chwetheza amandla.cpl kwaye ucofe iqhosha lokungena ukuze uvule ukhetho lwefestile yamandla. Ngoku kwiscreen sokukhetha amandla, cofa kuTshintsha iiSetingi zoCwangciso kwikhonkco elikufutshane nesiCwangciso saMandla sangoku. Emva koko, cofa kuTshintsha izicwangciso zaMandla eziPhezulu. Ifestile entsha yokungena iya kuvula apha yandisa useto lwe-USB emva koko kwakhona Yandisa I-USB ekhethiweyo yokumisa useto Njengoko kubonisiwe ngezantsi komfanekiso.
Umqhubi wudfrd akaphumelelanga ukulayisha iiwindows 10
Apha khetha ukhetho olukhubazekileyo lwe 'Plug In' kunye 'nakwiBhetri' xa usebenzisa i-Laptop. Cofa sebenzisa kwaye Kulungile ukugcina izicwangciso ezingasentla, ukuqala kwakhona iiwindows kunye nokucofa isixhobo se-USB ujonge ukusebenza kwayo.
Abanye windows Abasebenzisi baxela Emva kokukhubaza Windows 10 uphawu lokuQala olukhawulezileyo kukhetho lwamandla ingxaki isixhobo se-USB esingaziwayo Impazamo elungiselelwe bona. Unokukhubaza ukhetho lokuqalisa ngokukhawuleza Iphaneli yokulawula> I-Hardware kunye nesandi > Ukhetho lwaMandla .
Kwicala lasekhohlo Cofa kwi Khetha okwenziwa liqhosha lamandla, Emva koko Cofa apha Shintsha iisetingi ezingafumanekiyo ngoku . Apha sukukhangela Vula ukuqalisa ngokukhawuleza Njengoko kubonisiwe ngezantsi komfanekiso kwaye ucinezele Gcina Utshintsho .
Nika amandla ukuQala okuQala ngokukhawuleza
I-Tweak yeWindows Registry ukulungisa isixhobo asibonwanga Impazamo
Ukuba zonke izisombululo ezingentla ziyasilela ukulungisa isixhobo asibonwanga Impazamo, Masenze i-windows registry ukulungisa le mpazamo. Okokuqala fakela isixhobo esinengxaki, kwaye uvule umphathi wesixhobo. Emva koko wandise Abalawuli be-Universal Serial Bus, Cofa ekunxantathu omthubi otyheli ophawule isixhobo se-USB ukuba yeyiphi ebangela ingxaki kwaye ukhethe iipropathi.
Emva koko yiya kwiNgcaciso yeenkcukacha Apha ukuhla kwePropathi, khetha indlela yomzekelo weDivayisi. Kwaye kwiCandelo lexabiso, gqamisa ixabiso kwaye ucofe ekunene, ukhethe Khuphela. umzekelo, Njengoko kubonisiwe ngezantsi kwesixhobo sam sendlela: I-USB ROOT_HUB30 4 & 2060378 kunye ne-0 kunye ne-0
khuphela umzekelo wendlela yesixhobo
Ngoku cinezela windows + R, chwetheza regedit kwaye kulungile ukuvula windows irejista yomhleli. Emva koko uye ku HKEY_LOCAL_MACHINE INKQUBO CurrentControlSet Enum \_ Izixhobo zeParameter .
Qaphela umzekelo wendlela yesixhobo: I-USB ROOT_HUB30 4 & 2060378 kunye ne-0 kunye ne-0 (Kugqityiwe enye yeNdlela yokuSebenza kwesiXhobo.) Ngamana indlela yesixhobo seDivayisi yahlukile. tshintsha ngokokwakho.
Emva koko cofa ekunene kwiiparameter zeDivayisi eNtsha> Ixabiso leDWORD kwaye uyiqambe igama Uphuculo loLawulo lwaMandlaLunikwe amandla . Phinda ucofe kuyo kwaye kwixabiso lokuseta intsimi 0. cofa ok kwaye Vala uMhleli weRegistry. Ngoku susa isixhobo se-USB kwaye uqalise ngokutsha ngokulula iiwindows. Xa ixesha elizayo ungena kwisixhobo oku kuyakusebenza ngaphandle kwempazamo.
Ezi zezinye zezona zisombululo zisetyenziswayo ukulungisa isixhobo se-USB esingaziwayo kwimpazamo kwiwindows 10, 8.1 kunye nakwiikhompyuter ezisi-7. Ndiyathemba ukuba oku kuyakuwucombulula lo mcimbi usaludinga uncedo, okanye unayo nayiphi na imibuzo malunga nale posi uzive ukhululekile ukuxoxa ngezimvo zingezantsi. Funda kwakhona Ukulungisa ukubonisa umqhubi kuyekile ukuphendula kwaye ufumene iiwindows 10
windows 10 isikrini esimnyama esinemouse
ukulungiswa windows uhlaziyo lwedatha
i-itunes ayinakunxibelelana nale ipad kwenzeke impazamo engaziwayo 0xe800002d
iipropathi zomshicileli azinakuboniswa ukufikelela kungavunyelwa
utyikityo lwedijithali lwale fayile alunakuqinisekiswa
indlela kwakhona windows 10 ivenkile